Ngwọta Ngwọta Ngwọta Ngwọta Siri ike | China Solid Doosage Solution Manufacturers and Suppliers
Z usoro Capsule na-ejuputa igwe
Z usoro igwe juputara na capsule emeputara nke oma maka ogwu juputara na ogwu ndi siri ike, a na-enwekwa igwe di iche iche. A na-eji ya eme ihe maka ijuputa ụdị ọgwụ dị iche iche n'ihi nzube ya dị iche iche, ọrụ zuru oke, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na njuputa ziri ezi. Ọ nwere ụdị pụrụ iche ma nwee ike mezue ngwakọta agwakọta nke ọgwụ dị iche iche n'otu capsule.
S Series Mbadamba ụrọ pịa igwe
S usoro mbadamba igwe akuko iji nye oru oma mbadamba ịpị ngwọta dabere na mkpa nke ndị ọrụ. A na-amata nkwụsi ike ya na ntụkwasị obi ya na ụlọ ọrụ ahụ, yana ọrụ ya dị mfe, njikwa na-agbanwe agbanwe na akpaaka na-eto eto. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike ịnye mbadamba okpukpu abụọ na mbadamba mbadamba ihe ọkụkụ, na-enye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ mbadamba mbadamba.
G Series mkpuchi Equipment
G usoro mkpuchi igwe nwere ike ịhazi ụdị ọ bụla na ogo nke ngwaahịa, yana ọ bụ ezigbo akụrụngwa maka mkpuchi ihe nkiri nke mbadamba, mkpuchi ihe nkiri nke mbadamba micro, mkpuchi shuga, mkpuchi pellets na oyi akwa. The patented ihicha usoro nwere ike dị ukwuu mma ihicha arụmọrụ na ngwaahịa mma.
P Series perforated mkpuchi Equipment
P usoro perforated mkpuchi igwe bụ a ụwa-klas ngwaahịa na adopts ọhụrụ mkpuchi technology. Ọ na-agwakọta uru nke igwe mkpuchi niile na ahịa mba ụwa ugbu a ma na-ezute ihe ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ọgwụ maka iche iche igwe na ihicha, nke nwere ike mepụta nrụpụta zuru ezu, belata mgbasa nke ihe ndị na-arụ ọrụ ma mee ka nchedo nchekwa nke ndị ọrụ.
DG usoro Granulator
Akọrọ granulator bụ ụdị nke gburugburu ebe obibi-echebe akụrụngwa na ala ego, elu arụmọrụ, ume ịzọpụta na-enweghị mmetọ. Usoro nke compacting, akpụ, ndinuak na granulator nke akọrọ ahụ site n'ibu extrusion rụrụ site na iji crystalline mmiri nke ihe onwunwe onwe ya.
HLSG usoro Wet Granualator
LGL Series Fluid ndina draya
Enwere ike igbanwe draya mmiri na-eme ngwa ngwa na iche iche, nke nwere ike ịkwado ihe GMP chọrọ. Fluid bed draya ruo ruo 12 mmanya, ATEX Dabara, nwere ike nyere dị ka onye ọrụ chọrọ.